सबै खेलहरु भन्दा कराते, तेक्वान्दो पहिलो नम्वरमा आउछः हरीश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष तेक्वान्दो संघ | KTM Khabar
२०७३ भदौ ३१ गते १३:०० मा प्रकाशित
काठमाडौँ । तेक्वान्दो खेलमा ३ दशक पार गरिसकेका तथा राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय जगतमा आफ्नो ख्याती कमाएका एक परिचित नाम हो हरीश्वर पोखरेल । पोखरेल अहिले तेक्वान्दो संघका उपाध्यक्ष पनि छन् । यसैगरी खेल नै मेरो जीवन हो, यस कै लागि लागिरहन्छु भनेर अहिले तेक्वान्दोलाई व्यवस्थित गर्नका लागि अर्जुन फिटनेश सेन्टर, नक्सालमा सञ्चालनमा ल्याएका छन् ।
यिनै पोखरेलसंग केटीयम खबर डट कमका श्याम कार्कीले विशेष भिडियो सम्वाद गरेका छन् । प्रस्तुत छ सो कुराकानीको सम्पादित अंशः
अहिले म तेक्वान्दो प्लस मार्सल आर्टलाई कसरी व्यवस्थि गर्न सकिन्छ र यो समयमा समग्र युवाहरु निस्क्रिय छन् । तिनीहरुको जुन उर्जा छ । त्यो उर्जाको व्यबस्थापन भइरहेको छैन र मेरो भनाई के हो ? भने उर्जा भनेको भन्ने कुराको म उदाहरण दिन्छु मैले चलाएको मोटरसाइकल र पन्ध्र बर्षकोले चलाएको मोटरसाइकलमा उसको बढी उर्जा हुन्छ । त्यसकारणले गर्दा त्यसलाई हामीले व्यबस्थापन गर्न सक्यौ भने देशको विकास हुन्छ । र उ आफैलाई पनि फाइदा हुन्छ । जस्तै तेक्वान्दो, कराते, जुम्वा खेलाइ दियो भने उनीहरुको उर्जा व्यबस्थित हुन्छ, कला सिक्छ र उ भविष्यमा गएर मेडलिष्ट पनि बन्न सक्छ । यसैलाई मध्यनजर गर्दै मैले अर्जुन फिटनेश क्लब पनि सञ्चालनमा ल्याएको छु । जहाँ ३ बर्ष देखि ८० बर्ष सम्मका व्यक्तिहरुलाई लक्षित गर्दै सुरु गरेको छु ।
यहाँ तेक्वान्दोमा नै तिन दशक पार गरी सक्नु भएको छ, अव यसको सम्भावनालाई कस्तो देख्नु भएको छ ?
अव मेडलको सम्भावना हेर्नुहुन्छ भने अरु सबै खेलहरु भन्दा कराते, तेक्वान्दो पहिलो नम्वरमा आउछ । देशको सम्भावना बोकेको भन्नुहुन्छ भने तेक्वान्दो, कराते हो, अरु छैन । एसियन गेममा पनि म खेल्न जादा चार जना साथिहरुले तेश्रो भएर ल्याएको यही गेम हो । ओलम्पिकहरुमा पनि यो लेभलको मेडल अरु खेलहरुले ल्याएका छैनन् ।
हाम्रो देशको कुरा गर्ने हो भने महिलाहरु पछाडी परी रहेका छन्, पुरष प्रधान भइरहेको छ । बिकसित देशको कुरा गर्ने हो भने महिलाहरु घरको काम भन्दा बाहिरी काममा कन्फिडेन्ट हुन्छन् । कन्फिडेन्ट बनाउने हो भने मार्सल आर्ट सिक्नु जरुरी छ र यसबाट सबैलाई कन्फिडेन्ट बनाउछ । जस्तै घरमा लोग्ने स्वास्नी विच नै विबाद भइ हाल्यो भने पनि लोग्नेले हिर्काउन खोज्यो भने उसले ब्लग गर्न सक्छ र अर्को चोटी उसले हान्न त सक्दैन नी त रोके पछी त । जसले गर्दा म के भन्छु भने महिला प्लस सबै युवाहरुले यो सिक्नु पर्छ ।
मार्सल आर्ट भनेको खेल मात्र नभइ व्यबहारीक ज्ञान पनि हो, भन्नुहुन्छ ?
खेलकुद भनेको खेलका लागि मात्र नभइ आफ्नो शरिरको फिटनेशका लागि पनि हो । शरिर रहेसम्म त हामीले अरु काम गर्ने हो र आफु स्वस्थ भइएन भने कसरी हामीले अरु काम गर्न सक्छौ र ?
हाम्रो समाजमा हेर्ने हो घरमा अभिभावकले होमओर्क गर्यो कि गरेन भनेर सोध छन् तर कति खेल्यौ भनेर सोध्दैनन् र खेल्नु हुदैन भन्ने सोचाइ छ ।
तेक्वान्दो संघका उपाध्यक्ष हरीश्वर पोखरेलसंगको थप भिडियो कुराकानी हेर्नका लागि तल क्लिक गर्नुहोस् :-